China Non-geared Three row roller Slewing Bearing 130 Series အကြီးစား စက်ပစ္စည်းစက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူအတွက် |Wanda
17" Slewing Drive အတွက်...
Wanda အရည်အသွေးမြင့် Slewing...
Precision Bearing Light အမျိုးအစား...
Light type Slewing Bearing...
လေးလံသောစက်ယန္တရားများအတွက် ဂီယာမပါသော သုံးတန်း roller Slewing Bearing 130 စီးရီး
1. Three row roller slewing bearing တွင် ကြီးမားသော ဝန်စွမ်းရည်ရှိသည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုအချိန်သည် 40 ရက်ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။
3. ကျွန်ုပ်တို့သည် ISO9001:2015၊ CCS၊ SGS လက်မှတ်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
4.ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ပုံဆွဲခြင်းဖြင့် OEM slewing bearing ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
5. ပြီးပြည့်စုံသော စစ်ဆေးမှု လိုအပ်ပါသည်။
Selwing bearing ကို slewing ring bearing ၊ turntable bearing ၊ slewing ring ၊ rotation လို့ခေါ်ပါတယ်။
သုံးတန်း roller slewing ring တွင် ပြိုင်ပွဲသုံးမျိုးပါရှိပြီး အပေါ်၊ အောက်နှင့် အချင်းများသော ပြေးလမ်းများကို ခွဲခြားထားသောကြောင့် ရိုလာအတန်းတစ်ခုစီ၏ ဝန်ကို တိကျစွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် အမျိုးမျိုးသောဝန်များကို ထမ်းနိုင်သည်။၎င်းသည် ထုတ်ကုန်လေးမျိုးတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။shaft နှင့် radial အတိုင်းအတာများသည် အတော်လေးကြီးမားသည်။
အထူးသဖြင့် ဘီးတပ်တူးဖော်ခြင်း၊ ဘီးတပ်ကရိန်းများ၊ သင်္ဘောကရိန်းများ၊ ဆိပ်ကမ်းကရိန်းများ၊ သွန်းသောသံမဏိ လည်ပတ်သည့်ပလပ်ဖောင်းများကဲ့သို့သော ကြီးမားသောအချင်းများ လိုအပ်သည့် အကြီးစားစက်ယန္တရားများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
ကြီးမားသော တန်ချိန်ထရပ်ကား ကရိန်းများနှင့် အခြားစက်ပစ္စည်းများ။
ယခင်- ပြင်ပဂီယာ 111 စီးရီး swing bearing ပါသော အတန်းဖြတ် ရိုလာတုံး လှည့်ကွင်း
နောက်တစ်ခု: 113 စီးရီး လျှပ်ကူးလက်စွပ်ကို တိကျသော စက်ယန္တရားများအတွက် အသုံးပြုသော အတွင်းသွားများပါရှိသည်။
1. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုစံနှုန်းသည် စက်ယန္တရားစံ JB/T2300-2011 အရ ISO 9001:2015 နှင့် GB/T19001-2008 တို့၏ ထိရောက်သော အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ (QMS) ကို တွေ့ရှိထားပါသည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့သည် မြင့်မားသောတိကျမှု၊ အထူးရည်ရွယ်ချက်နှင့် လိုအပ်ချက်များဖြင့် စိတ်ကြိုက် slewing bearing ၏ R&D ကို မြှုပ်နှံထားပါသည်။
3. ပေါများသော ကုန်ကြမ်းများနှင့် မြင့်မားသော ထုတ်လုပ်မှု ထိရောက်မှုတို့ဖြင့် ကုမ္ပဏီသည် သုံးစွဲသူများထံသို့ ထုတ်ကုန်များကို တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပြီး ဖောက်သည်များ စောင့်ရမည့်အချိန်ကို တိုစေပါသည်။
4. ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းပိုင်းအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုတွင် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးသေချာစေရန် ပထမအကြိမ်စစ်ဆေးခြင်း၊ အပြန်အလှန်စစ်ဆေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် နမူနာစစ်ဆေးခြင်း ပါဝင်သည်။ကုမ္ပဏီတွင် ပြီးပြည့်စုံသော စမ်းသပ်ကိရိယာများနှင့် အဆင့်မြင့်စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများရှိသည်။
5. ခိုင်မာသောအရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည် သုံးစွဲသူပြဿနာများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီဖြေရှင်းနိုင်စေရန်၊ ဖောက်သည်များအား ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကို ပေးဆောင်ရန်။
ကြီးမားတဲ့ slewing bearing
ကြက်ခြေခတ် roller slewing bearing
marine slewing bearing ၊
Thin Section Cross Roller Slewing Bearing
သုံးတန်း roller bearing
ထရပ်ကားကရိန်း slewing bearing
အတွင်းပိုင်းဂီယာ Three row roller Slewing Bearing...
Single row cross roller အမျိုးအစား Slewing Bearing အတွက်...
လေးလံသော တုံးသုံးတန်း လေးလံသော Slewing bearing...
သုံးတန်း roller လှည့်စားပွဲ slewing bearing exte...
စက်ရုံမှထောက်ပံ့သော အရည်အသွေးမြင့် Triple Row Roller S...
အရည်အသွေးမြင့် သုံးတန်း Roller Slewin...